သတိထားကြဖို့ပါ ဈေးကွက်ထဲကပဲပင်ပေါက်တွေအမြစ်တိုနေရသည့်အကြောင်းအရင်း Post Detail | Razzwire
ပဲပင်ပေါက်ဆိုတာ မြန်မာ့ဟင်းလျာတွေထဲမှာ လူအများကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ ဟင်းအမယ် တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပဲပင်ပေါက်ကို ကြော်စားခြင်း၊ သုပ်စားခြင်း ၊တို့စရာအဖြစ် သုံးဆောင်ခြင်း စသဖြင့် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် သုံးဆောင်ကြပါတယ်။ ဒီလို သုံးဆောင်သူတွေများပြားလာတာကြောင့် ပဲပင်ပေါက်ရဲ့ ဈေးကွက်ဟာလည်း အင်မတန် ကြီးမားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို ကြီးမားလာတဲ့ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက် စီးပွားရေးသမားတွေဟာ
ပဲပင်ပေါက်တွေကို ဆေးတွေ ၊ ချွတ်ဆေးတွေ အသုံးပြုပြီး လုပ်လာကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က မျှဝေထားတာကြောင့် ဗဟုသုတ အဖြစ် ကျန်းမာရေးအသိ ရရှိအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
” အမြစ်လည်းတို အသက်လည်းတို ” မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ပဲပင်ပေါက်လုပ်ငန်း လုပ်ဖို့အကြံတောင်းတဲ့အခါ လုပ်နည်းစနစ်လေးတွေ ပြောပြဖြစ်တယ်ပေါ့။ နောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာတော့ သူကဖုန်းဆက်တယ် ” ကိုကြမ်းရေ ” ပဲပင်ပေါက်လုပ်တဲ့နည်းမှာ ဆေးသုံးကြတယ်ဗျ။ အဲ့ဒိဆေးသုံးရင် ပဲပင်ပေါက်အမြစ်တွေ မပါသလောက်ကို တိုတယ် အဲ့ဆေးအမည်သိလား”ကိုကြမ်း” ဟာ ငါသိတဲ့နည်းက ပေါက်လာတဲ့ အပင်တွေကို အမြစ်ကနေဓားနဲ့ဖြတ် ရောင်းတာပဲသိတာ အမြစ်တိုဆေးသုံးတာ မသိသလို အဲ့ဆေးအမည်လည်း မသိဘူးဟ စုံစမ်းကြည့်အုံးမယ်။ ငါပြန်ပြောမယ် ခဏတော့စောင့် ။
အဲ့ဒိအဖြေပေးပြီး မှတ်ဥာဏ်ထဲ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ပဲပင်ပေါက် လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို လိုက်စုံစမ်းတော့ အဖြေက* ဟုတ်တယ်ဗျ ကိုလူကြမ်းရ အမြစ်တိုဆေး သုံးကြတယ်။ ဒါတင်မကဘူးဗျ အချို့တွေက ချွတ်ဆေးတွေပါ သုံးကြသေးတယ်။ ** ဟာ ခင်ဗျားဟာ နောက်ဆေးတစ်မျိုးတောင် တိုးလာပါလား သိသလောက်လေး ရှင်းပြပါအုံး။ ဘာဖြစ်လို့သုံးကြတာလည်း ? ဘာတွေထူးခြားလို့ သုံးတာလည်း ? ကျွန်တော်လည်း သေချာတော့ မသိဘူးဗျ အမြစ်တိုဆေးသုံးတာက တိုနေတဲ့အမြစ်လေးပါ ချက်စားလို့ရသလို အမြင်လည်းကောင်းတာ ပါမယ်ဗျ။ နောက်တစ်ချက်က ဖောက်ပြီးရောင်းတဲ့အခါ အမြစ်ပါထည့်ပေးလိုက်တော့ ရေရှည်ခံတယ်လေ။ ချွတ်ဆေးသုံးတာကတော့ ပဲပင်ပေါက်တွေက ရက်ကြာတဲ့အခါ အရောင်ပြောင်းပြီး ဈေးကွက်မှာမလှတော့ အရောင်ဖြူအောင် ချွတ်ဆေးသုံးကြတာ ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။
အဲ့ဒိအမြစ်တိုဆေးဆိုတာ ဘယ်ကထုတ်တာလည်း ? သူ့စွမ်းအားဘယ်လောက်ရှိလည်း ? ဓာတ်ကြွင်းအာနိသင်ကာလ ?အဲ့ဒါလေးတွေ သိလားဗျ သိသလောက်လေး ပြောပြပါလား ?* ထိုင်းစာတွေနဲ့မို့ ထိုင်းကထုတ်တာတော့ သိတယ် ဒီလောက်ပဲ ကျန်တာတွေကတော့ ပဲတပိသာဖောက်ရင် ဒီဆေးကိုဒီလောက်ထည့်ရတယ်ဆိုတဲ့ တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နားကြားပြီး လုပ်နေကြတာ။ ဈေးကွက်ကလည်း လက်ခံ စားသုံးသူကလည်း နှစ်သက်နေလေတော့ အမှားကြာ အမှန်ဖြစ်ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့ ကိုလူကြမ်းရေ။
အဲ့ဒိတိုဆေးဗူးပုံလေး ပို့ပေးပါလား ? ဗူးကြီးဝယ်မသုံးတာကြာပြီ တခါသုံး (တခါသုံး အုန်းဆီဗူးလို)ဗူးလေးတွေပဲ သုံးနေကြတော့တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ထောက်ကြန့်ဈေးထဲသွား တိုဆေး အကြောင်း စနည်းနာကြည့်တော့ ” အံမယ် ဟုတ်သားလား ပဲပင်ပေါက်လေးတွေ အမြစ်ငေါက်တောက်လေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ထက်တောင် တိုနေသေး။ (ကျွန်တော်အရပ်က တိုတယ် ပုတယ် ပြောတာပါ ) တပိသာ တခြင်းကို လက်လီဈေး တစ်ထောင်ကျပ်။ ဖောက်သည်ဈေး ကိုးရာကျပ်။ ကိုယ်ကသွင်းမယ်ဆို ရှစ်ရာကျပ်။
အစ်ကို ဖောက်မယ်ဆို ဒီပုံစံအတိုင်းနော် အမြစ်တိုရမယ် အရောင်ဖြူရမယ်။ ဟာ အေးပါကွာ ခုတစ်ခြင်းပေး ရော့ တစ်ထောင်။ ကဲ ပဲပင်ပေါက်တော့ရပြီ (တိုဆေးသုံးထားတဲ့ ပဲပင်ပေါက်လေး ချွတ်ဆေးပါ မပါတော့ မမြင်ရတော့ မသိ) သူနဲ့ လိုက်ဖက်တာက ” ပဲပြား ” ကဲ ပဲပြားလေးပါထည့် (ပဲပြားကရော ဖော်မလင် သုံးလား မသုံးလား သေချာမမြင်ရလေတော့) ကဲ လိုက်ဖက်ညီသော ဟင်းတစ်ပွဲ ” အာဂပါးစပ် လူဖြစ်ကျိုးနပ်ပဟဲ့ ” စာသားအတိုင်း ခုချက်ခြင်းတော့ မသေနိုင်ပါဘူးကွာ သေနေ့စေ့သေရမပေါ့ ဆိုသော လူတိုင်းတွေးတဲ့အတွေးကို ကျွန်တော် လူကြမ်းရင်ဝယ်ပိုက်လို့ ဆီရွှဲရွှဲလေးနဲ့ ကြော်စားလိုက်ပါတော့ သတည်း။
မပြီးသေးဘူးဗျ ကျန်သေးတယ် ထမင်းဝိုင်းမှာလေ ပဲပင်ပေါက်ပဲပြားကြော်လေးကို ထမင်းနဲ့ရောနယ် တလုပ်စားလိုက် ပြောလိုက် စားလိုက် ပြောလိုက်* ဒီမှာ တို့စားနေတဲ့ ပဲပင်ပေါက်ကို အစိမ်းအတိုင်းလက်နဲ့ဖြစ်ကြည့်လိုက်စမ်း အထဲမှာ အခေါင်းပေါက်ကြီးဟ သူတို့သုံးတဲ့ အမြစ်တိုဆေးက အဲ့အခေါင်းထဲ ဝင်နေမှာကျိမ်းသေပဲ။ နောက်ပြီး ပဲစေ့ကနေ ပဲပင်ပေါက်ဖြစ်ဖို့ ကာလက သုံးရက် ဟောအခုတို့တွေ စားနေပြီ ဓာတုဆေးတွေရဲ့ ဓာတ်ကြွင်းက ဒီလောက်ရက်တိုတိုလေးနဲ့တော့ မကုန်နိုင်တာ ကျိမ်းသေတယ်။ ဘယ်လိုလည်း အရသာရှိရဲ့လား ? (ငါ့ကိုတစွန်းလောက်ထည့်ပါအုံးဟ)
ပဲပြားလည်းကြည့်အုံး အသားကပွပွကြီး ဖော်မလင် သုံးထားတဲ့ဟာဆို အဲ့ဒိအတွင်းသားထဲ ရှိနေအုံးမှာဟ ဘယ်နှယ့် စားလို့ကောင်းလား အေး စားကြ စားကြ ဆေးသုံးရမဲ့ အချိုးအစားမသိ (သူများပြော ရမ်းထည့်) ဆေးတွေရဲ့ အကျိုးအပစ်တွေမသိ (သူများပြော မှန်းထည့်) စီးပွားရေးကလည်း တွက်ချေကိုက် (ဝယ်သူကလည်းကြိုက်တာကိုး) ကဲ ဘာများပြောခြင်ကြသေးလည်းဗျ ပြောစရာရှိရင် ပြောသွားကြဗျာCredit- SMT(နေ့စဉ်သတင်းနှင့်သုတရသအဖြာဖြာ)source-Lu Gyan Gyi 9-9-2019
ပဲပငျပေါကျဆိုတာ မွနျမာ့ဟငျးလြာတှထေဲမှာ လူအမြားကွိုကျနှဈသကျကွတဲ့ ဟငျးအမယျ တဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ ပဲပငျပေါကျကို ကွျောစားခွငျး၊ သုပျစားခွငျး ၊တို့စရာအဖွဈ သုံးဆောငျခွငျး စသဖွငျ့ နညျးလမျးအမြိုးမြိုးဖွငျ့ သုံးဆောငျ
ကွပါတယျ။ ဒီလို သုံးဆောငျသူတှမြေားပွားလာတာကွောငျ့ ပဲပငျပေါကျရဲ့ ဈေးကှကျဟာလညျး အငျမတနျ ကွီးမားလာတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဒီလို ကွီးမားလာတဲ့ ဈေးကှကျလိုအပျခကျြကို ဖွညျ့ဆညျးဖို့အတှကျ စီးပှားရေးသမားတှဟော
ပဲပငျပေါကျတှကေို ဆေးတှေ ၊ ခြှတျဆေးတှေ အသုံးပွုပွီး လုပျလာကွတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒီအကွောငျးလေးကိုတော့ မိတျဆှတေဈယောကျက မြှဝထေားတာကွောငျ့ ဗဟုသုတ အဖွဈ ကနျြးမာရေးအသိ ရရှိအောငျ ပွနျလညျ
” အမွဈလညျးတို အသကျလညျးတို ” မိတျဆှတေဈယောကျက ပဲပငျပေါကျလုပျငနျး လုပျဖို့အကွံတောငျးတဲ့အခါ လုပျနညျးစနဈလေးတှေ ပွောပွဖွဈတယျပေါ့။ နောကျရကျအနညျးငယျကွာတော့ သူကဖုနျးဆကျတယျ ” ကိုကွမျးရေ ” ပဲပငျပေါကျလုပျတဲ့နညျးမှာ ဆေးသုံးကွတယျဗြ။ အဲ့ဒိဆေးသုံးရငျ ပဲပငျပေါကျအမွဈတှေ မပါသလောကျကို တိုတယျ အဲ့ဆေးအမညျသိလား”ကိုကွမျး” ဟာ ငါသိတဲ့နညျးက ပေါကျလာတဲ့ အပငျတှကေို အမွဈကနဓေားနဲ့ဖွတျ ရောငျးတာပဲသိတာ အမွဈတိုဆေးသုံးတာ မသိသလို အဲ့ဆေးအမညျလညျး မသိဘူးဟ စုံစမျးကွညျ့အုံးမယျ။ ငါပွနျပွောမယျ ခဏတော့စောငျ့ ။
အဲ့ဒိအဖွပေေးပွီး မှတျဉာဏျထဲ သိမျးဆညျးထားတဲ့ ပဲပငျပေါကျ လုပျငနျးလုပျနတေဲ့ မိတျဆှတှေကေို လိုကျစုံစမျးတော့ အဖွကေ* ဟုတျတယျဗြ ကိုလူကွမျးရ အမွဈတိုဆေး သုံးကွတယျ။ ဒါတငျမကဘူးဗြ အခြို့တှကေ ခြှတျဆေးတှပေါ သုံးကွသေးတယျ။ ** ဟာ ခငျဗြားဟာ နောကျဆေးတဈမြိုးတောငျ တိုးလာပါလား သိသလောကျလေး ရှငျးပွပါအုံး။ ဘာဖွဈလို့သုံးကွတာလညျး ? ဘာတှထေူးခွားလို့ သုံးတာလညျး ? ကြှနျတျောလညျး သခြောတော့ မသိဘူးဗြ အမွဈတိုဆေးသုံးတာက တိုနတေဲ့အမွဈလေးပါ ခကျြစားလို့ရသလို အမွငျလညျးကောငျးတာ ပါမယျဗြ။ နောကျတဈခကျြက ဖောကျပွီးရောငျးတဲ့အခါ အမွဈပါထညျ့ပေးလိုကျတော့ ရရှေညျခံတယျလေ။ ခြှတျဆေးသုံးတာကတော့ ပဲပငျပေါကျတှကေ ရကျကွာတဲ့အခါ အရောငျပွောငျးပွီး ဈေးကှကျမှာမလှတော့ အရောငျဖွူအောငျ ခြှတျဆေးသုံးကွတာ ဖွဈနိုငျတယျဗြ။
အဲ့ဒိအမွဈတိုဆေးဆိုတာ ဘယျကထုတျတာလညျး ? သူ့စှမျးအားဘယျလောကျရှိလညျး ? ဓာတျကွှငျးအာနိသငျကာလ ?အဲ့ဒါလေးတှေ သိလားဗြ သိသလောကျလေး ပွောပွပါလား ?* ထိုငျးစာတှနေဲ့မို့ ထိုငျးကထုတျတာတော့ သိတယျ ဒီလောကျပဲ ကနျြတာတှကေတော့ ပဲတပိသာဖောကျရငျ ဒီဆေးကိုဒီလောကျထညျ့ရတယျဆိုတဲ့ တဈဆငျ့စကား တဈဆငျ့နားကွားပွီး လုပျနကွေတာ။ ဈေးကှကျကလညျး လကျခံ စားသုံးသူကလညျး နှဈသကျနလေတေော့ အမှားကွာ အမှနျဖွဈထုံးစံအတိုငျးပဲပေါ့ ကိုလူကွမျးရေ။
အဲ့ဒိတိုဆေးဗူးပုံလေး ပို့ပေးပါလား ? ဗူးကွီးဝယျမသုံးတာကွာပွီ တခါသုံး (တခါသုံး အုနျးဆီဗူးလို)ဗူးလေးတှပေဲ သုံးနကွေတော့တယျ။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ကိုယျနဲ့အနီးဆုံးဖွဈတဲ့ ထောကျကွနျ့ဈေးထဲသှား တိုဆေး အကွောငျး စနညျးနာကွညျ့တော့ ” အံမယျ ဟုတျသားလား ပဲပငျပေါကျလေးတှေ အမွဈငေါကျတောကျလေးတှနေဲ့ ကိုယျ့ထကျတောငျ တိုနသေေး။ (ကြှနျတျောအရပျက တိုတယျ ပုတယျ ပွောတာပါ ) တပိသာ တခွငျးကို လကျလီဈေး တဈထောငျကပျြ။ ဖောကျသညျဈေး ကိုးရာကပျြ။ ကိုယျကသှငျးမယျဆို ရှဈရာကပျြ။
အဈကို ဖောကျမယျဆို ဒီပုံစံအတိုငျးနျော အမွဈတိုရမယျ အရောငျဖွူရမယျ။ ဟာ အေးပါကှာ ခုတဈခွငျးပေး ရော့ တဈထောငျ။ ကဲ ပဲပငျပေါကျတော့ရပွီ (တိုဆေးသုံးထားတဲ့ ပဲပငျပေါကျလေး ခြှတျဆေးပါ မပါတော့ မမွငျရတော့ မသိ) သူနဲ့ လိုကျဖကျတာက ” ပဲပွား ” ကဲ ပဲပွားလေးပါထညျ့ (ပဲပွားကရော ဖျောမလငျ သုံးလား မသုံးလား သခြောမမွငျရလတေော့) ကဲ လိုကျဖကျညီသော ဟငျးတဈပှဲ ” အာဂပါးစပျ လူဖွဈကြိုးနပျပဟဲ့ ” စာသားအတိုငျး ခုခကျြခွငျးတော့ မသနေိုငျပါဘူးကှာ သနေစေ့သေ့ရေမပေါ့ ဆိုသော လူတိုငျးတှေးတဲ့အတှေးကို ကြှနျတျော လူကွမျးရငျဝယျပိုကျလို့ ဆီရှဲရှဲလေးနဲ့ ကွျောစားလိုကျပါတော့ သတညျး။
မပွီးသေးဘူးဗြ ကနျြသေးတယျ ထမငျးဝိုငျးမှာလေ ပဲပငျပေါကျပဲပွားကွျောလေးကို ထမငျးနဲ့ရောနယျ တလုပျစားလိုကျ ပွောလိုကျ စားလိုကျ ပွောလိုကျ* ဒီမှာ တို့စားနတေဲ့ ပဲပငျပေါကျကို အစိမျးအတိုငျးလကျနဲ့ဖွဈကွညျ့လိုကျစမျး အထဲမှာ အခေါငျးပေါကျကွီးဟ သူတို့သုံးတဲ့ အမွဈတိုဆေးက အဲ့အခေါငျးထဲ ဝငျနမှောကြိမျးသပေဲ။ နောကျပွီး ပဲစကေ့နေ ပဲပငျပေါကျဖွဈဖို့ ကာလက သုံးရကျ ဟောအခုတို့တှေ စားနပွေီ ဓာတုဆေးတှရေဲ့ ဓာတျကွှငျးက ဒီလောကျရကျတိုတိုလေးနဲ့တော့ မကုနျနိုငျတာ ကြိမျးသတေယျ။ ဘယျလိုလညျး အရသာရှိရဲ့လား ? (ငါ့ကိုတစှနျးလောကျထညျ့ပါအုံးဟ)
ပဲပွားလညျးကွညျ့အုံး အသားကပှပှကွီး ဖျောမလငျ သုံးထားတဲ့ဟာဆို အဲ့ဒိအတှငျးသားထဲ ရှိနအေုံးမှာဟ ဘယျနှယျ့ စားလို့ကောငျးလား အေး စားကွ စားကွ ဆေးသုံးရမဲ့ အခြိုးအစားမသိ (သူမြားပွော ရမျးထညျ့) ဆေးတှရေဲ့ အကြိုးအပဈတှမေသိ (သူမြားပွော မှနျးထညျ့) စီးပှားရေးကလညျး တှကျခကြေိုကျ (ဝယျသူကလညျးကွိုကျတာကိုး) ကဲ ဘာမြားပွောခွငျကွသေးလညျးဗြ ပွောစရာရှိရငျ ပွောသှားကွဗြာCredit- SMT(နစေ့ဉျသတငျးနှငျ့သုတရသအဖွာဖွာ)source-Lu Gyan Gyi 9-9-2019
မွနျမာနိုငျငံတှငျ အပြျောတမျး ပါရာမိုတာစီးပွီး ရှုခငျးကွညျ့နိုငျသောဝနျဆောငျမှု နောငျခြိုမွို့တှငျ စတငျနေ
မနျးရှစေကျတျောဘုရားပှဲ လုံခွုံရေး ၂၄ နာရီပတျလုံး စီစီတီဗှီကငျမရာမြားဖွငျ့ စောငျ့ကွညျ့မညျ
စဈသုံ့ပနျးတှထေဲက နှဈဦးကို ပွနျလှတျမယျလို့ AA ထုတျပွနျ